RIKOODHII: CL – Guruub C: Barcelona oo guul soo laabasho ah ka gaartay Borussia Moenchengladbach, xilli Man City ay barbaro la gashay Celtic kulan 6 gool la iska dhaliyey – Gool FM
RIKOODHII: CL – Guruub C: Barcelona oo guul soo laabasho ah ka gaartay Borussia Moenchengladbach, xilli Man City ay barbaro la gashay Celtic kulan 6 gool la iska dhaliyey
Haaruun September 29, 2016
(Borussia) 29 Sebt 2016 – Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa guul soo laabasho ah ka gaartay Borussia Moenchengladbach oo ay marti u ahayd kulan ka tirsan guruubka C ee Champions League.
34′ daqiiqo Barcelona waxaa gool uga naxsaday xiddiga ka tirsan Borussia Moenchengladbach ee Thorgan Hazard, kaasoo ay walaalo yihiin Eden Hazard oo ka tirsan kooxda Chelsea, sidaas ayaana lagu kala nasay Barca oo 1-0 looga gacan sarreeyo.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Barcelona ayaa waxaa goolka barabraha u dhaliyey 65′ daqiiqo Arda Turan, waxaana goolka guusha ku hoggaamiyey difaacooda joogga dheer ee Gerard Pique.
>- Guushaan ay Barcelona ka gaartay Borussia Moenchengladbach ayaa ka dhigan inay guul gaareen 4 ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaareen Champions League, halka labada kulan ee kalena ay barbaro galeen, marka Barca lagama adkaan lixdii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaareen Champions League.
Halkaan hoose ka daawo goolasha kooxaha Borussia Moenchengladbach 1 – 2 Barcelona:-
Dhinaca kale kooxda Celtic ayaa barbaro 3-3 la gashay naadiga Manchester City oo marti u ahayd kulan la iska dhaliyey 6 gool, Man City ayaana mar waliba goolka barbaraha baadi goobaysay ciyaarta.
>- Celtic waa kooxdii ugu horreysay tartammada oo dhan taasoo ay Manchester City ku guuldarreysatay inay garaacdo xilli ciyaareedkan.
>- Man City xilli ciyaareedkan kooxdii ay qabtaanba madaxa ayey ka garaaci jireen, laakiin xalay waxaa la yiri ima dhaaftid kulankooda Champions League ayaana ku soo dhammaaday barbaro 3-3.
>- Labo daqiiqo iyo 23 ilbiriqsi (2:23) waxa uu ahaa goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee ay kooxda Celtic ka dhaliso Champions League, waxaana Moussa Dembele uu ka dhaliyey kooxda Man City.
>- Waxa ay ahayd markii ugu horreysay oo Manchester City laga dhaliyo labo gool iyo wax ka badan iyadoo uu tababare u yahay Pep Guardiola.
>- Raheem Sterling ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee Ingiriis ah oo gool dhaliya midkalena ka dhaliya kooxdiisa hal kulan oo ka tirsan Champions League, xalay ayuuna Otareeto iska dhaliyey goolna u dhaliyey kooxdiisa.
Halkaan hoose ka daawo goolasha kooxaha Celtic 3 – 3 Manchester City:-
CL - Guruub B: Kooxda SSC Napoli oo afar gool afka u galisay Benfica iyo Besiktas oo barbaro la gashay Dynamo Kyiv
CL - Guruub D: Atletico Madrid oo garaacday Bayern Munich, iyadoo kooxda macallin Carlo Ancelotti ay la kulantay guudarradii ugu horreysay ee xilli ciyaareedka